How'd it happen and more reports?: ပုလဲမြို့သစ်က လမ်းမတန်းမြေဈေးတွေ သိန်း၊သောင်းဂဏန်းမှာရှိ
ပုလဲမြို့သစ်က လမ်းမတန်းမြေဈေးတွေ သိန်း၊သောင်းဂဏန်းမှာရှိ
မနှစ်၂၀၁၃ခုနှစ်က မြေဈေးနှုန်းတွေပါ...ဈေးနှုန်းလေးတွေ နှိုင်းယှဉ်လို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ... ဒီနှစ်၂၀၁၄ခုနှစ်မှာတော့ ဈေး၂ဆလောက် ထပ်တက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်....
ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၃ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၀ - မင်္ဂလာဒုံ၊ ပုလဲမြို့သစ်က မြေကွက်ဈေးနှုန်းတွေ တစ်ဧကကို သိန်းသောင်းဂဏန်းအထိ မြင့်တက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“အာဆီယံလမ်းလဲ ဖောက်မယ်ပြော တယ်၊ စက်မှုဇုန်တွေလဲ များတယ်၊ ဆီဆိုင်၊ ကုမ္ဗဏီတွေကလဲ ဝယ်တာများတယ်၊ အဲ ဒါကြောင့်လဲ ဈေးတွေက တစ်စတစ်စ မြင့် တက်လာတယ်”လို့ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ဦးအေးမြင့်က ပြောပါတယ်။
ပုလဲမြို့သစ် အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းတွေက လမ်းမတန်းမှာဆို သိန်းသောင်းဂဏန်း အထိ ရှိပေမဲ့ အတွင်းလမ်းတွေမှာတော့ ပေ ၄၀ ¥ ပေ ၆၀ မြေကွက်ကို သိန်း ၅၀ဝ ကျော်ဝန်းကျင်ပဲ ရှိပါတယ်။ ခြံကျယ်ကျယ် နဲ့ နေရာကောင်းတွေ ဖြစ်တာကြောင့် စီးပွားရေးသမားတွေ အများဆုံး စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ ၄င်းမြေဈေးနှုန်းတွေက နေရာ အကျယ်အဝန်းပေါ် မူတည်ပြီး အပြောင်း အလဲ ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
“အခုက လမ်းမတန်းဆိုရင် သိန်း ထောင်ဂဏန်းဆိုတာ မရှိဘူး၊ သိန်း သောင်းဂဏန်းမှာပဲ ရှိတယ်၊ လမ်းအတွင်း မြေဈေးကလဲ ဂဏန်းသေးသေးမွှားမွှား မရှိသလောက်ဘဲ”လို့ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ဦးအေးမြင့်ကပဲ ပြောပါ တယ်။
မြေဈေး ကောင်းတယ်ဆိုတာက ယခုနောက်ပိုင်း သွားရေးလာရေး လွယ်ကူလာသလို အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေး၊ စက်မှုဇုန်စတဲ့ နေရာတွေမှာ လုပ်ငန်းတွေ စည်ကားလာတာ ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
“အဲဒီက မြေဈေးတွေကတော့ တက် ပြီးရင်း တက်နေမှာပဲ၊ နောက်ပိုင်း ပိုပြီး စည်လာမယ်၊ လမ်းတွေလဲ ကောင်းတယ်”လို့ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် ဦးစိုးမိုးက ပြောပါတယ်။
သိန်း ၄၈၀ = ၃၀ ပေx ၆၀ပေ မြေကွက် : ရောင်းရန် - Peral(3), Mingalondon
Mya Sabel Street
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | မင်္ဂလာဒုံ
Listed on 23 June 2014
480.00 သိန်း (ညှိနှိုင်း)
အကျယ်အဝန်း : (30'x60')
အိမ်ခြံမြေ အမည် : Peral(3), Mingalondon
အိမ်ခြံမြေ အမျိုးအစား : ခြံ ၊ မြေကွက်
လမ်းအမည် : Mya Sabel Street
တိုင်း၊ပြည်နယ် : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မြို့ ၊ မြို့နယ် : မင်္ဂလာဒုံ
ဈေးနှုန်း : 480.00 သိန်း (ညှိနှိုင်း)
တယ်လီဖုန်း : No
အဲယားကွန်း : No
အိပ်ခန်း : No
ရေချိုးခန်း : No
စတင်အသုံးပြုနိုင်မည်နေ : immediately
ပိုင်ဆိုင်မှု : စာချုပ်
သိန်း ၂၁၅၀ =မင်္ဂလာဒုံ သစ်ဆိပ်ကုန်း ပေ၁၀၀×ပေ၁၃၀ ရွှေနံသာလမ်း ပျဉ်ထောင်နှစ်ထပ်အိမ် တစ်လုံးပါ
Listed on 11 September 2014
2150.00 သိန်း (ညှိနှိုင်း)
အကျယ်အဝန်း : (130'x100')
အိမ်ခြံမြေ အမည် : မင်္ဂလာဒုံ သစ်ဆိပ်ကုန်း ပေ၁၀၀×ပေ၁၃၀ ရွှေနံသာလမ်း ပျဉ်ထောင်နှစ်ထပ်အိမ်တစ်လုံးပါ
လမ်းအမည် : ရွှေနံသာလမ်း
ဈေးနှုန်း : 2150.00 သိန်း (ညှိနှိုင်း)
စတင်အသုံးပြုနိုင်မည်နေ : ၀ယ်ယူသည့်နေ
ပိုင်ဆိုင်မှု : ဂရံ
ပေ၁၀၀×ပေ၁၃၀ မြေကွက်သို့ဝင် ပေ၁၀×ပေ၁၃၀ အကျယ်လမ်းပါဝင်သည်။
သိန်း ၆၅၀၀= ပေ၂၀၀ ပတ်လည် မြေကွက် : ရောင်းရန် - မင်္ဂလာဒုံ ရွှေနံ့သာရွာမ ခြံကျယ်ကျယ်ရောင်းမည်။
6500.00 သိန်း (ညှိနှိုင်း)
အကျယ်အဝန်း : (200'x200')
အိမ်ခြံမြေ အမည် : မင်္ဂလာဒုံ ရွှေနံ့သာရွာမ ခြံကျယ်ကျယ်ရောင်းမည်။
လမ်းအမည် : ကျားခေါင်းသစ်စက်လမ်း
ဈေးနှုန်း : 6500.00 သိန်း (ညှိနှိုင်း)
တယ်လီဖုန်း : Yes
ငွေနံ့သာ သစ်ခွဥယျာဉ်၊ ပုလဲမြို့သစ်၊ အမှတ် (၃) လမ်းမကြီး အနီး၊
အမှတ် (၃) လမ်းမကြီးမှ ကားဖြင့် ၅ မိနစ်ခန့်သွားဝင်ရသည်။ ဆယ်ဘီးကားကြီးများ ၀င်ထွက်သွားလာနိုင်သောလမ်းဖြစ်သည်။ မီး၊ ဖုံး၊ အ၀ီစိရေ၊ ရေတွင်းရေ၊ ရေကန် (၃)လုံး၊ တစ်ထပ်တိုက်ပု တစ်လုံး၊ အခြေခံ ဂိုဒေါင်တွဲလျက်ပါသည်။ အတွင်း ဂုတ်ခြံဖြစ်သည်။ ခြံရှေ့လမ်း နဲ့ ခြံဘေးတွင် ဖြတ်လမ်းတိုတစ်ခုရှိသည်။ လုပ်ငန်းလုပ်ရန်သင့်တော်သည်။
မင်္ဂလာဒုံ ရွှေနံသာစံပြရပ်ကွက် ပေ 160'x130' အကျယ်မြေပေါ်ရှိ RC ၁ ထပ်တိုက် နှင့် ဂိုဒေါင်တစ်လုံးရောင်းရန်ရှိသည်။
အိမ်ခြံမြေဆိုင်ရာ လိပ်စာ: ရန်ကုန်, မင်္ဂလာဒုံ, မင်္ဂလာဒုံ ရွှေနံ့သာစံပြ အင်ကြင်းလမ်း
~ $ 400,000.0
Living area (ft²): 1200
Land Size (ft²): 20800
မင်္ဂလာဒုံ အမှတ် ၃ လမ်းမကြီး၏ လမ်းသွယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သော ကျွန်းရွှေဝါလမ်းမကြီးနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော ရွှေနံ့သာစံပြရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ၁ ထပ် RC လုံးချင်းအိမ်ဖြစ်ပါသည်။ မြေအကျယ် 80'x130' အပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ အိမ်အတွင်း မာစတာအိပ်ခန်းကြီး ၁ ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း ၂ ခန်းတို့ပါဝင်ပြီး ပရိဘောဂအပြည့်အစုံဖြစ်ပါသည်။ ခြံဝန်းအပြည့်နီးပါ ကွန်ကရစ်ခင်းထားပြီး ဘန်ဂလို စတိုင်လ် လုံးချင်းအိမ်ဖြစ်ကာ စိတ်ငြိမ်းအေးချမ်းသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရပ်ကွက် ဖြစ်ပါသည်။။ ထောင့်ကွက်ဖြစ်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်သော အိမ် ဖြစ်သည်။ကားဂိုဒေါင်ပါဝင်သည့်အပြင် ဂိုဒေါင်တစ်လုံးပါဝင်ကာ ရေမီးလည်းပြည့်စုံပါသည်။ ကား ၄ စီးခန့် ရပ်နိုင်သော ကားပါကင်လည်းပါရှိပါသည်။ မြို့တွင်းနှင့် အလှမ်းဝေးသော်လည်း အဓိကကျသော လမ်းမကြီးများနှင့် ဆက်သွယ်ထားသဖြင့် မြို့တွင်းကို ၄၅ မိနစ် ခန့် ကားမောင်းရုံဖြင့် ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဈေးနှုန်း ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။
မင်္ဂလာဒုံ ရွှေနံသာစံပြရပ်ကွက်ရှိ ပေ 80'x130' အကျယ်မြေပေါ်ရှိ RC ၁ ထပ်တိုက် ရောင်းမည်။
~ $ 250,000.0
Land Size (ft²): 10400
မင်္ဂလာဒုံ အမှတ် ၃ လမ်းမကြီး၏ လမ်းသွယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သော ကျွန်းရွှေဝါလမ်းမကြီးနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော ရွှေနံ့သာစံပြရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ၁ ထပ် RC လုံးချင်းအိမ်ဖြစ်ပါသည်။ မြေအကျယ် 80'x130' အပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ အိမ်အတွင်း မာစတာအိပ်ခန်းကြီး ၁ ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း ၂ ခန်းတို့ပါဝင်ပြီး ပရိဘောဂအပြည့်အစုံဖြစ်ပါသည်။ ခြံဝန်းအပြည့်နီးပါ ကွန်ကရစ်ခင်းထားပြီး ဘန်ဂလို စတိုင်လ် လုံးချင်းအိမ်ဖြစ်ကာ စိတ်ငြိမ်းအေးချမ်းသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရပ်ကွက် ဖြစ်ပါသည်။။ ထောင့်ကွက်ဖြစ်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်သော အိမ် ဖြစ်သည်။ကားဂိုဒေါင်ပါဝင်ကာ ရေမီးလည်းပြည့်စုံပါသည်။ ကား ၄ စီးခန့် ရပ်နိုင်သော ကားပါကင်လည်းပါရှိပါသည်။ မြို့တွင်းနှင့် အလှမ်းဝေးသော်လည်း အဓိကကျသော လမ်းမကြီးများနှင့် ဆက်သွယ်ထားသဖြင့် မြို့တွင်းကို ၄၅ မိနစ် ခန့် ကားမောင်းရုံဖြင့် ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဈေးနှုန်း ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။
မင်္ဂလာဒုံ ရွှေနံသာစံပြရပ်ကွက်ရှိ ပေ 80'x130' အကျယ်မြေပေါ်ရှိ ပျဉ်ထောင် ၁ ထပ်အိမ်နှင့် ဂိုဒေါင် ရောင်းမည်။
~ $ 150,000.0
မင်္ဂလာဒုံ အမှတ် ၃ လမ်းမကြီး၏ လမ်းသွယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သော ကျွန်းရွှေဝါ လမ်းမကြီးနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော ရွှေနံ့သာစံပြရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ၁ ထပ် PT လုံးချင်းအိမ်ဖြစ်ပါပြီး စိတ်ငြိမ်းအေးချမ်းသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရပ်ကွက် ဖြစ်ပါသည်။ မြေအကျယ် 80'x130' အပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထား ပြီး အုတ်တံတိုင်း အပြည့်ခတ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ မြေကွက်အတွင်း ဂိုဒေါင်တစ်လုံးပါဝင်ပါပြီး ရေမီးလည်းပြည့်စုံပါသည်။ မြို့တွင်းနှင့် အလှမ်းဝေးသော်လည်း အဓိကကျသော လမ်းမကြီးများနှင့် ဆက်သွယ်ထားသဖြင့် မြို့တွင်းကို ၄၅ မိနစ် ခန့် ကားမောင်းရုံဖြင့် ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဈေးနှုန်း ညှိနှိုင်းနိုင် ပါသည်။
Shwe Nanthar san Pya Myo thit 80'x65' land sale in
Mingaladon ! 943days ago upgrade
SN: L946 2012-02-24 14:51
500 Lakh Ks (≒52083 US＄, 1US＄≒960Ks)
land space: 5200 ft2 (80x65) (=483.08m2)
Shwe Nan Thar Sanpya ,Mingaladon Township,Yangon City.
နှစ်(၆၀) ဂရံမြေ အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ကွန်ကရစ်ခင်းထားပြီးသောလမ်းဖြစ်၍ ဈေးနှုန်းအလျော့အတင်းရှိပါသည်။
you can take bus 130,236,133,102,51,35 to go there.
Pearl myo thit 100'x200' land for sale in
SN: L1580 2013-09-23 11:35
1050 Lakh Ks (≒109375 US＄, 1US＄≒960Ks)
land space: 4800 ft2 (40x120) (=445.92m2)
Zapel St,Pearl New Town,Mingalardon Township.
100'x200' Land for sale in Pearl city ! 470 days ago upgrade
SN: L1381 2013-06-24 11:51
5800 Lakh Ks (≒604166 US＄, 1US＄≒960Ks)
land space: 20000 ft2 (100x200) (=1858m2)
floor space: 5000 ft2 (50x100) (=464.5m2)
Cherry street,Pearl city,Mingalardone township.
Nyar Na Quarter,Pearl New City, 145'x308' land for sale in Mingalardon ! 149 day(s) ago updated
SN: L1850 2014-04-29 11:07
8500 Lakh Ks (≒885416 US＄, 1US＄≒960Ks)
land space: 44660 ft2 (145x308) (=4148.914m2)
Nyar Na Quarter,Pearl New City,Mingalardon Township,Yangon City.
Complete water and electricity provided.Having 1 BN.
You can take 43,102 and 214 bus to go there.
အိမ် + ခြံ ရောင်းမည်။ ၃၀ ပေx၅၀ ပေ၊ နှစ် ၆၀ဂရံမြေ။အမှတ်(၆၈၂)မြစံပယ်လမ်းသွယ် ပုလဲ (၃)ရပ်ကွက် ပုလဲမြို့သစ် နိုဝင်ဘာ ၆ ၂၀၁၃
အိမ် + ခြံ ရောင်းမည်။ ၃၀ ပေx၅၀ ပေ၊ နှစ် ၆၀ဂရံမြေ။အမှတ်(၆၈၂)မြစံပယ်လမ်းသွယ် ပုလဲ (၃)ရပ်ကွက် ပုလဲမြို.သစ်။ သိန်း၆၀၀
Type :3bedrooms / 1 bath
Location : Yangon Region Yangon , Mingaladon
Price : 600 Lkhs
ပုလဲမြို့သစ်က မြေဈေးလေးတွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင်.....
ကားပွဲစားတန်း ပြောင်းမည်ဆို၍ ပုလဲမြို့သစ်တစ်ဝိုက် မြေဈေးများ အချိန်တို အတွင်း နှစ်ဆနီးပါးထိုးတက်
mizzima |9July 2013
ရန်ကုန်မြို့၊ လမ်းမတော်မြို့နယ် မင်းရဲ ကျော်စွာလမ်းရှိ ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေး စခန်း အား မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ ပုလဲမြို့သစ်သို့ ပြောင်း ရွှေ့ဖွင့်လှစ်မည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်မှု ကြောင့် ပုလဲမြို့သစ်နှင့် အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ မြေကွက် ဈေးနှုန်းများ အချိန်တိုအတွင်း နှစ်ဆကျော် အထိ ထိုးတက်သွားကြောင်း အိမ်ခြံမြေအကျိုး ဆောင်များက ပြောကြား သည်။
ဟံသာဝတီယာဉ်ရပ်နားစခန်းမှနေ၍ မင်းရဲကျော်စွာယာဉ်ရပ်နားစခန်းသို့ ပြီးခဲ့သည့် မတ်လတွင် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ယင်းနောက် မကြာမီပင် မင်းရဲကျော်စွာယာဉ်ရပ်နားစခန်း နေရာအား အဆင်မြင့်ဆေးရုံ တည် ဆောက်မည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ယာဉ်ရပ်နားစခန်းကို ပုလဲမြို့သစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့မည်ဟု သတင်း များထွက်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါသတင်း အပေါ်အခြေပြုကာ ဇွန်လလယ်ခန့်မှစတင်ပြီး ယင်းသို့ဈေးနှုန်းများပြောင်းလဲလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ယင်းတို့က ပြောကြားသည်။
ပုလဲမြို့သစ်ရှိ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်တစ်ဦးက ''အခုအချိန်ကတော့ အသံမကြားလိုက်နဲ့ ဈေးတက်မယ့်လူ နဲ့ လိုက်ဝယ်မယ့် လူနဲ့ ဈေးကွက်က အဲဒီလိုဖြစ်နေတာ''ဟု ပြောသည်။
ပုလဲမြို့သစ်တွင် မြေဈေးနှုန်းများသည် အဓိကအားဖြင့် လမ်းမတန်းများတွင် မြင့်တကနေခြင်းဖြစ်ကာ ယခင်က ပေ ၁ဝဝပတ်လည် မြေတစ်ကွက်လျှင် ကျပ်သိန်း ၃,ဝဝဝခန့်ဖြစ် ရာမှ ယခုအခါ ကျပ်သိန်း ၅,ဝဝဝအထိမြင့်တက် သွားခြင်းဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ်အရောင်း အဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိကာ ဓာတ်ဆီဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင် အစရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် ဝယ်ယူကြခြင်းဖြစ်ပြီး ရပ်ကွက်အတွင်း၌ မူလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှုကြောင့် ဈေးနှုန်းပမာဏထူးခြားစွာမြင့်တက်ခြင်းမရှိကြောင်း စိုင်းခွန်နောင်အိမ်ခြံမြေအကျုိး ဆောင်လုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြော သည်။
ပုလဲမြို့သစ်နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ မြေဈေးနှုန်း များမှာ အမှတ်(၃)လမ်းမကြီးတစ်လျှောက် တွင် တစ်စတုရန်းပေလျှင် ကျပ်တစ်သိန်းခန့် ဖြစ်ပြီး ပေ ၄ဝx ၆ဝ၊ ပေ၆ဝx၈ဝနှင့် ပေ၁ဝဝ ပတ်လည် စသဖြင့် မြေကွက်များရှိပြီး လုပ်ငန်းပေါ်မူတည်ကာ ဈေးနှုန်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အရောင်း အဝယ်ဖြစ်နေကြပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း၌ပင် မြေကွက်ကြီးသုံးခုခန့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း နယ်မြေခံ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
အမှတ်(၃)လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်တွင် ဓာတ်ဆီဆိုင်၊ မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်း များ၊ မော်တော်ယာဉ်အကြီးစားပြုပြင်မှုဝပ်ရှော့စသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တည်ထောင်မှု လျင်မြန်စွာ တိုးပွားလာနေပြီး ယခုကဲ့သို့ ဈေး နှုန်းတစ်ဟုန်ထိုးမြင့်တက်ခြင်းသည် အမှတ် (၃)လမ်းမကြီးကို စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်ပိုင်း မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ ပုလဲမြို့သစ်၊ သင်္ဃန်း ကျွန်းကြီး၊ ထောက်ကြံ့၊ နွယ်ခွေ စသည့်ဒေသများတွင် ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်သည်။